Konke ku-One Smart 30W 40W 60W isibani somgwaqo se-LED ukukhanya komgwaqo welanga
I-Aluminium die isakaza izinto, i-surface anit-aging electrostatic
ukucubungula isifutho, ukumelana okukhulu nokugqwala.
Ukuhlanganiswa kwamapaneli elanga, amabhethri kanye nezilawuli ze-photovoltaic kwenza ukufakwa kwamalambu kube lula kakhulu;
-5 ° ～ 90 ° uguqule ngokuguquguqukayo i-angle yokuthambekela yamapaneli elanga ukuhlangabezana nezidingo zokufakwa kwawo wonke ama-latitude emhlabeni jikelele, futhi isikali esiqondile sigcina amalambu engaguquguquki ekufakweni kwe-batch;
Uhlelo olusha lokwakhiwa kokukhanya kokukhanya lubheka ngokujulile ukukhanyiswa okume mpo kwabahamba ngezinyawo emgwaqeni, ukuze uhla olukhanyayo oluqonde mpo lomgwaqo lube lukhulu futhi ukufana kokukhanyisa komgwaqo kube ngcono;
Isilawuli se-photovoltaic sikubeka ngokufanelekile ukukhanya kwamalambu ngezikhathi ezahlukahlukene, umsebenzi wokungeniswa komzimba womuntu wehlisa amandla wezibani lapho kungekho muntu, futhi umsebenzi wokunciphisa amandla we-low-power uthuthukisa kakhulu ukubekezela kwezibani.
I-40W ukukhanya kwelanga okuholelekile kuhola ingadi 15W
Imfashini yesimanje yokubukeka, yenze ukukhanya kwaba umsebenzi wobuciko, Kuhlanganiswe ne
imvelo ngokuphelele, ukwenziwa kufana nephrojekthi ephezulu.
Izinto ezisemqoka ezisetshenziswa ezintweni eziphakeme ze-aluminium die cading material, surface anit-aging electrostatic
I-PC diffuser, ukumelana nomthelela wamandla amakhulu.
I-Voltage yokufaka: AC110-277V, 50 / 60Hz, IP66, Ik08
Amandla we-Factory Direct Strong R & D Amandla aholele ukukhanya kwepaki le-luna
Amandla aphezulu e-aluminium die asakaza izinto, i-surface anit-aging electrostatic
I-PC diffuser, ukumelana namandla okuqina kwamandla.
I-Voltage yokufaka: AC100-240V, 50 / 60Hz, IP66, IK08
Umshayeli ufakwe engalweni
I-Street Lamp Light Outdoor Yonke i-100w Luminous White Led Body Power Lighting ipholile
Isetshenziswe ekukhanyeni okuphezulu kwe-aluminium die, i-electrostatic
Ikhava yengilazi evulekile ebonakalayo, ukumelana namandla amakhulu.
I-Voltage yokufaka: AC100-240V, 50 / 60Hz, IP66, Ik09
· Izinhlobo ezihlukile zelensi yokuzikhethela
Indawo enomoya: JD-1060 600 cm2, JD-1061 815 cm2
Umshayeli we-dimming 0-10v
Iminyaka engu-5 iwaranti
ip66 NEMA die casting aluminium ongaphandle ifektri yelanga kwaholela solar antique street light
· Amandla aphezulu e-aluminium die casting material, surface anit-aging electrostatic
Ikhava yelensi yePmma.
Ukufakwa okuvundlile: + 10 ° ∽-10 °
Ukufakwa okumile: + 10 ° ∽-10 °
Amamojula we-LED: ama-1-4 ama-PC wokukhetha
Isampula le-oda lamukelwe ngokushesha ukulethwa kwensimu ekhanyayo ngaphandle
· Isetshenziswa ezintweni eziphakeme zokuphonsa i-aluminium die, i-surface anit-aging electrostatic
I-Angie iyashintsha: + 15∽-15
Indawo enomoya: 570 cm2
· Iminyaka engu-5 iwaranti
I-IP66 Led Street Lighting ye-Highway solar pv iholele ukukhanya komgwaqo Nge-CE Standard
Ukuncintisana Kwentengo Ye-Die Cast Aluminium off-road light
Ikhava ye-Len, ukumelana namandla okuqina kwamandla.
Ukufakwa ovundlile: + 10 ° ~ -10 ° adjustable
Ukufakwa okuqondile: + 10 ~ -10 ° adjustable
Indawo enomoya: 375 cm2
I-AC 85-265V Solar System Iyatholakala I-LED Housing Street Light Motion Sensor 40 45 50 60 Watts Led Street Light
I-Aluminium die die casting, surface anit-aging electrostatic
· Ikhava ye-Len, ukumelana nomthelela wamandla amakhulu.
* I-Voltage yokufaka: AC100-240V, 50 / 60Hz, IP66, Ik08
Ukukhanya komgwaqo 250 watt kuholele ukukhanya komgwaqo
Ikhava yengilazi, ukumelana nomthelela wamandla aphezulu.
Isigaba sokufaka Il izinketho ezimbili
Iminyaka engu-5 Iwaranti Yokuphonsa I-Aluminium post Lamp Pole Light LED Garden Lights
1. Isibani sinesimo esifushane, futhi sinomthelela oqinile wokubuka.
2. Izingxenye eziyinhloko zomzimba wesibani zenziwe nge-die-cast aluminium, kanti ingaphezulu lifuthwe ngempuphu, enokuphikisana okuhle nomthelela wokugqwala.
3.Thola ubuchwepheshe obufana nobukhanyayo be-luminescence, ngaphandle kokukhanya, ngokufana okuhle.
4. Iwaranti yeminyaka emihlanu, isilinganiso se-IP66 sokungena manzi.
I-2020 Hot Die Cast Aluminium Floodlight CE ROHS IP65 100w 150w 200 watt LED Light Light
Izinto ezisetshenziswayo ezisetshenziswa ekuphonseni izinto ezinamandla amakhulu, izinto ezingaphezulu kwe-anit-aging electrostatic
Ikhava yengilazi emnene, ukumelana namandla amakhulu.